Samatar’s Story The deadly road to Europe - Telling the Real Story
Samatar waa wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah oo yimi Sweden sanadkii 2016. Wuxuu ku soo barbaaray gobol ay ku nool yihiin saboolnimo iyo dagaal sokeeye. Inbadan oo ka mid ah asxaabtiisa iskuulka ayaa wadanka ka tagay iyagoo raadinaya nabad, fursad iyo nolol wanaagsan. Qaarkood waxay gaareen Yurub waxayna bilaabeen inay la wadaagaan sawirro, farriimo iyo qoraallo ku saabsan nasiib wanaag noloshooda cusub ee ay deggan yihiin. Samatar wuxuu rabay mustaqbal kaan oo kale ah, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu aado Yurub.
“Waxay igu yiraahdeen waa inaan Yurub imaadaa. Markii ay ii soo direen sawirro, waan kaftamay oo waxaan goostay inaan halkaas u safro. Sawirradii aan ku arkay dalka Sweden waxay muujiyeen meel qurux badan: Ninkani wuxuu hor taagan yahay muuqaal aad u fiican, koofiyad iyo muraayadaha indhaha. Waxaan mooday, Wow, inuu ninkani leeyahay gaarigaas oo uu haysto lacag aad u badan. Meeshan waxaa ka buuxa lacag. Waa inaan halkaas aadaa oo aan xoogaa raadsadaa. ”
Waxay u muuqatay xitaa in muuqaalka saaxiibbadiisa uu isbedelay: waxay u muuqdeen midab cad sawirada la dhajiyay, wuxuuna doonayay inuu u ekaado sidii ay ahaayeen. Isaga iyo qaar ka mid ah ardayda fasalkiisa ah, dhallinyarda dhammaantood, waxay go'aansadeen inay cararaan oo u safraan Yurub. Waxay ka tageen dugsiga maalin maalmaha qadada ah, iyagoo aan ogeysiin waalidkood, yaa joojin lahaa. Waxay soo ururiyeen lacagtooda oo dhan, xitaa xatooyada safarka.
Waxay ku dhex mareen Itoobiya gaari iyo lug; ka dib waxay ka tallaabeen xadka Suudaan iyaga oo u sii gudbaya kaymaha iyo beeraha, iyagoo iska ilaalinaya waardiyayaal. Tahriibayaashoodu waxay ahaayeen kuwa adag oo arxan daran, iyagoo garaacaya kuwa si aad u tartiib ah u socday oo ka tagay kuwa aan lahayn awood ay ku sii wataan. Markii ay yimaadeen magaalada Khartoum, way daalanaayeen, cagohoodu jabeen oo cudurka qabeen. Samatar iyo lix qof oo kale ayaa ku dhacay duumo.
Ka dib safar safar xun oo dhex maray Sahara, kaas oo uu Samatar ka baqay inuu ku dhinto kuleylka, waxay yimaadeen Liibiya. Waxaa loo qaaday xarun, loo sheegay inay ku bixiyaan US $ 4,800 seddex maalmood gudahood ayna siiyaan taleefanno ay ku wacaan oo ay weydiistaan qoysaskooda lacag. Arintaani waxay argagax ku noqotay dhalinyarada da 'yarta ah ee soomaaliyeed oo aan waxbadan ka ogayn waxyaabaha noocaas oo kale ah. Si waalidiinta loogu qasbo inay bixiyaan, tahriibiyeyaashu si naxariis darro ah ayey u garaacaan.
“Soomaali badan ayaa lugaha ka jabtay tahriibiyaasha. Dad aad u fara badan ayaa u dhintey garaacistii. Labadaas bilood waxaa la iiga garaacay birta lugtaadana way i dhaawacantay.”
Isaga iyo asxaabtiisa waxay soo uruuriyeen kala bar lacagtii tahriibiyeyaashu dalbadeen, laakiin waa la siidaayay oo loo oggolaaday inay kusii jeedaan xeebta. Wadada loo maro Talyaaniga waxay ahayd mid cabsi leh; dhexdeeda bad weyn oo naxariis leh, naxariis darada ayaa sii waday. Hal wiil oo jiran oo codsaday daawo ayaa la toogtay.
Markuu yimid Yurub, Samatar wuxuu filayey inuu helo jannada ee loo ballanqaaday. Wuxuu raadsaday lacag dhulka ku kala firdhay wuxuuna ku fikiray inuu guursado gabadh hodan ah oo arki doonta markay eeydeeda ku dhex lugaynayso beerta. Faa'iidooyinkaas ayaa si dhakhso leh u lumay oo wuxuu gartay in xitaa Yurub dhexdeeda, uusan jirin wado fuulid bilaash ah iyo lacag fudud. Wuxuu ku bixiyay qiimo aad u xun aqoontan.
“Waxaan dareemayaa walaac mana seexan karo habeenkii. Waan ku riyooday riyooyinka. Si aan nafteenna u mashquulno, asxaabteyda iyo anigu ayaan u baxnaa. Haddaan keligay ahay, waxaan xusuustaa wixii xerada ku dhex dhacay: dadka lugaha iyo gacmaha la jebiyey; wiil toogasho lagu dilay; iyo waxyaabo kale oo xun. Aad ayaan u argagaxay si aan ula qabsado bulshadaan. ”